दिपकराज गिरीले किन अर्का श्रष्ट्राको गीत चोरी गरे ? |
दिपकराज गिरीले किन अर्का श्रष्ट्राको गीत चोरी गरे ?
२०७४, १२ श्रावण बिहीबार १४:३६ July 31, 2017 ताजा खबरमनोरन्जन
काठमाडाैं। गत सातामात्र राजधानीमा अायोजित एक कार्यक्रममा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी गर्नेलाई पाता फर्काउने प्रतिबद्ध व्यक्त गरेका थिए । पटकपटक गीत, संगीत, सिनेमाको पाइरेसी बढेको भन्दै सर्जकहरू चिन्तित भइरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीले यसो भनिदिंदा सर्जक कलाकारहरू खुशी हुनु स्वभाविक थियो । तर, नेपाली सिनेमा जगतका एक चर्चित कलाकारको खुशीभने धेरै दिन टिक्न सकेन । उनि दुःखी बन्नुको कारण अाफ्नो नयाँ श्रृंजना पुनः चोरी भएकोले होइन । श्रृंजना चोरी गरेको अारोप लागेकोले हो ।
एक ताका निक्कै चर्चामा रहेको फिल्म ‘छक्कापञ्जा’का कलाकार एवं निर्माता दिपकराज गिरीलार्इ गीत चोरी गरेको अारोप लागेको छ । दीपाश्री निराैलाद्वारा निर्देशित चलचित्र छक्कापञ्जाले सफलता हात पारेसँगै सोही टिमले तत्कालै ‘छक्का पञ्जा-२’ बनाउने घोषणा गरेको थियो । छक्का पञ्जा-२ बनेर पनि अहिले दर्शकमाझ अाउने तरखरमा छ । तर, यही चलचित्रको ‘हे दाजु नसमाउ नाडीमा, जान्न म त डिजेलको गाडीमा, हिलो लाग्ला नाइलनको साडीमा’ बोलको गीत दिपकराजले ‘चोरी गरेको’ आरोप लागेको छ ।
यसअघि दिपकराजले अाफ्नो फिल्म पाइरेसी गरेको भन्दै बाैद्धस्थित डेरागरी बस्ने एक युवकलार्इ धम्कीपूर्ण म्यासेज पठाएका थिए । जसका कारण उक्त युवकले अात्महत्या गरेको उनको परिवारको दावी थियो । ती केटाले अाफु फन्दामा पर्ने डरले अात्महत्या गरेको हुनसक्ने अाँकलन गरिएको छ ।
यदि कुनै व्यक्तिले बाैद्धिक सम्पत्तीको चोरी-निकासी गरेको प्रमाणित भएमा उक्त व्यक्तिलार्इ लाखौ रूपियाँ जरीवाना हुनसक्छ र कानुन बमोजिम जेल सजाँय भोग्नुपर्ने व्यवस्थासमेत कानुनले गरेको छ ।
गिरीले पाइरेसी गरेको भनिएको छक्कापञ्जा-२ को गीत अहिले एकातिर युट्युबमा राम्रै भ्युज पाइरहेको छ भने अर्कोतिर ‘नाइलनको साडी’ले समाजिक सञ्जालमा हंगामा मच्याइरहेको छ ।
नाइलनको साडी गीत कस्को हो ?
अहिले अमेरिकामा बस्दै अाएका सारंगी वादक श्याम नेपालीका अनुसार गीतका असली स्रष्टा उनका हजुरबा कान्छा मगर नेपाली हुन् । बाजेको काखमा यही गीत सुन्दै हुर्किएको श्यामले स्मरण गरेका छन् । श्यामका छोरा एवं कान्छा मगरका पनाती प्रिन्सले यो गीत पुनः गाउने तयारी गरिरहेका थिए । यसका निम्ति म्युजिक अरेन्जर तथा गायक अल्मोडा राना उप्रेतीसँग तालमेलसमेत मिलाइएको थियो ।
तर, अचानक उक्त गीत अल्मोडाले स्वारंकन गरे । केदार घिमिरे, स्वास्तिमा खड्कालगायतलाई नचाएर गीतको दृश्यांकन गरियो । ‘फिल्म छक्कापञ्जा- २ को गीत’ भन्दै युट्युवमा सार्वजनिक भयो । र, यहींबाट दीपकराज गिरी विवादमा तानिए ।
यो गीतका ‘गीतकार’ भनेर दीपकराज गिरीले सगर्व आफ्नो नाम लेखाएका छन् । जबकि उनैले एक ठाउँमा भनेका थिए ‘यो गीत मैले बच्चैदेखि सुन्दै आएको हुँ ।’ पहिले बताइरहेको कुरा बिर्सँदा अहिले दिपकराजलार्इ अफ्ठेरो परेको छ ।आफू जन्मनुअघि नै रचना भइसकेको गीतका ‘गीतकार’ दीपकराज भन्छन्, ‘यो गीतको लय र स्थायी पुरानै हो, बाँकी सबै मैले लेखेको हुँ ।’
गिरीको कथन छ, ‘पुरानो भइसकेको, हराइसकेको गीतलाई जब मैले नयाँ ढंगले उठान गरें, त्यो त राम्रो कुरा हो नि । हराइसकेको एउटा गीत फेरि नयाँ पुस्ताले गुनगुनाउन पायो, यो त खुशी हुनुपर्ने कुरा हो ।’ अाफुले गल्ती नगरेको भन्दै दिपकराज भन्छन्, ‘नेपाली समाजनै नकारात्मक छ ।’